Ingulule (i-Acinonyx jubatus) ithola igama layo kusuka egameni lesiHindi elithi "Chita", okusho ukuthi "libala" ngenxa yamacandi amnyama azungezile ekugqokeni kwengubo yegolide enemibala. Banamakhanda amancane anamehlo aphakeme futhi amathrekhi amnyama azungezile amathangi amhlophe.
Umzila omnyama obukeka njengezingoma ezinyembezi, ugijime kusukela ekhoneni elingaphakathi leso kuze kube sekhoneni lomlomo futhi usize ukwemukela i-glare ngesikhathi sokuzingela ngesikhathi sosuku. Imisila yawo inomude, emnyama ebhalwe ngamacici amnyama eya emgqeni omhlophe womsila.
Ukwakhiwa kwabo okunamandla okubenza bakwazi ukugijima kuze kube ngu-120 km / hr abenza izilwane zasemhlabeni ezisheshayo emhlabeni. Amantombazane amancane kakhulu kunamadoda, nezilwane ezindala ezilinganisa ubude buka-1,8 kuya ku-2,2 m ubude futhi zilinganiselwa ku-40 kg kuya ku-60 kg.
Ngokusho kwewebhusayithi yeTenikwa, ama-cheetah ahlukaniswa njengenye yezingane ezincane kodwa hhayi amaKhulu amakhulu, ngoba angenalo ithambo elinyukayo elisezintanyeni zabo futhi angabhongo kodwa enza umsindo wokukhala lapho bejabule. Ngenye yezinhlobo ze-cat kuphela ezingenayo izihluthulelo ngokugcwele ze-retractile, ngakho-ke umbono we-claws uzobonakala emathrekhi.
Ziyaziwa ukuthi ziyashukuma, nakuba zingayithandi kakhulu, futhi ziyizintaba eziphuthumayo, nakuba zingasebenzisa izihlahla ngamagquma angaphansi noma amagatsha ukuba aphumule noma asebenzise njengendlela yokubukela.
Abesilisa akuzona izindawo ikakhulukazi futhi bangahamba ezindaweni eziphethwe abesifazane abaningana. Ngaphandle kwezingonyama, yiyo kuphela enye yezinhlobo ze-cat e-Afrika ezizokwakha iqembu, ngokuvamile elinezinsikazi namathambo alo noma kwabesilisa abathathu kusukela kudoti ofanayo. Kodwa-ke, abesifazane, bavame ukuzibandakanya namanye ama-cheetah omdala phakathi nenkathi yokuvuthwa, okungaba yinoma yisiphi isikhathi phakathi nonyaka.
Isikhathi sokubeletha sihlala cishe izinsuku ezingu-92, kanti cishe ama-cubs amane azalwa ngamalitha. Amabhantshi azalwa ngendwangu yoboya egijima emhlane entanyeni kuya e-rump, okusiza ukuwafihla, futhi aphethwe ngotshani obude noma efihliwe ngaphansi kwe-underbrush.
Ngokusho kukaTenikwa, amaphesenti angama-90% afa ngaphambi kokuba abe nezinyanga ezintathu ubudala, kanti cishe isigamu sibhujiswe yizilwane. Amanye ama-40% ahlushwa amasosha omzimba abuthakathaka futhi angathuthuki ngenxa yokuntuleka kokuhlukahluka kofuzo.
Ama-Cheetah ayaziwa ukuthi yizinhlobo zezinhlobo ezilula eziyinkimbinkimbi ukuze ahlaziye futhi asetshenziswe njengabahlanganyeli bokuzingela imidlalo iminyaka engaphezu kwengu-5 000. Bathi, ngeshwa, ababelethi kahle ekuthunjweni.
I-cheetah ngokuyinhloko izingela ngosuku, ngokuvamile ekuseni noma ntambama. Bakhetha ukuhlala ezindaweni ezivulekile, ama-savannas, izimila ezinomdlandla futhi ngezinye izikhathi ngisho nezindawo zezintaba, ngoba ngokuvamile zidla izilwane zabo ngaphambi kokuba zixoshe. Uma sekubanjwe, inyamazane enkulu idliwa yi-bite kuze kube yilapho iminyango encane ingase ibulawe ngokushaywa okusheshayo ekhanda.
Bazodla ngokushesha ngemuva kokubulala isilwane, ngoba abakwazi ukuvikela ukudla kwabo kwezinye izidumbu. Isimbambo siphelela emphanjeni sizohlaselwa futhi isikhumba, amathambo kanye nezinto ezibandakanya kuzoshiywa. I-Cheetah ayibuyeli ekubulaleni futhi ayidli i-carrion.
Ingulule yizinhlobo ezivikelwe, ngakho-ke angeke zibulawe. Ezingu-100 000 ezihamba nge-Afrika, izingxenye zaseMpumalanga Ephakathi nase-Asia Ephakathi ngasekupheleni kwekhulu lama-20, ngaphansi kuka-7 500 kusasele kusendle futhi kungaphansi kuka-1 000 kusatholakala eNingizimu Afrika.
Ukuxazulula izinkinga zangaphambi kwesikhathi, i-Manual Management Management Manual, iphakamisa ukuthi abalimi bakhela i-kraal ngamagatsha bese bebeka imbuzi yeBoer bukhoma njengenhlanzi. Umgibho wezinyopho kufanele ubeke emnyango we-kraal ukuze uthathe u-cheetah. Ukulondolozwa kwemvelo kufanele kuhanjiswe ukuze kuthunyelwe i-cheetah uma ibanjwe. Ngaphandle kwalokho, i-cheetah ingahle ibe ne-tranquilised futhi ihanjiswe.
Umcingo wokufaka ucingo lwamajaji, okuyizingalo eziyi-1,2 m ukuvuleka kwamamitha angu-74, noma ucingo lwamandla kagesi, umsindo, ukukhanya nokuphunga, ukukhwabanisa kwezilwane, ukusebenzisa abelusi nezilwane eziqapha kungasiza bonke ukuvimbela ukulahleka.